कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, सञ्चयकर्तालाई के–के सुविधा छन् ? - Dainik Online Dainik Online
कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, सञ्चयकर्तालाई के–के सुविधा छन् ?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७८, बिहिबार ७ : ५४
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले कूल लगानी सवा चार खर्च नाघेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ सम्म कूल लगानी ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुर्‍याएको हो । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा संस्थामा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ ।
कोषले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कूल स्रोत ४ खर्ब ४४ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने जगेडा कोषमा ४० अर्ब १६ करोड बचत छ । सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष मौज्दात रहेको रकम ३ खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । निवृत्तभरण कोषमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने कोषलाई ४ अर्ब ६७ करोड दायित्व छ ।
कर्मचारीलाई सञ्चय कोषले सञ्चित रकममा ६.५० प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने गरेको छ । कोषले आर्थि वर्ष २०७६/७७ को खुद मुनाफाबाट सुरु मौज्दातको आधारमा एक प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउँछन् । जसको ब्याजदर ७.६० प्रतिशत छ । घर निर्माण गर्न वा घर खरिदमा अधिकतम एक करोडसम्म ७.९० प्रतिशत ब्याज छ । घर मर्मतमा पनि ७.९० प्रतिशत ब्याजरदमा ऋण लगानी हुन्छ । ७.९० प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक ऋण लिन पाइन्छ भने ८ प्रतिशतमा सरल चक्र कर्जाको सुविधा छ ।
न्युयोर्क । अमेरिकाले उत्पादन हुने खानेकुराको एक तिहाई खानेकुरा फाल्ने गरेको छ । अमेरिकाको वातावरण
‘बेलायतमा ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायस्तरमा फैलिरहेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग सम्बन्धित छैन’
बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदले बेलायतमा समुदायस्तरमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिरहेको बताएका छन्। उनले नयाँ
मोदी–पुटिनबीचको भेटलाई लिएर अमेरिका र चीनको चासो, भए यस्ता रक्षा र व्यापार सम्झौता…
भारत र रुसबीच २० वर्षदेखिको वार्षिक बैठकको शृङ्खला केही समयको विश्रामपछि यस वर्षबाट फेरि सुरुवात
बूढीगण्डकी बनाउने हो : अर्थमन्त्री शर्मा
धादिङ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी बनाउने र आफू अर्थमन्त्री हुँदा काम थाल्ने बताए ।
प्रकाशमानले खोले सम्पर्क कार्यालय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा
कुमारी बैंकले संचालनमा ल्यायो फोनलोन ईएमआई सुविधा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले नेपालमै पहिलो पटक फोनलोन ईएमआईमा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा ल्याएको
शक्ति राष्ट्रमा राजदूत : सांसद्को चिन्ता राष्ट्रिय स्वाधिनता, एमसीसी र कालापानीमा जवाफै आएन